शैक्षिक भ्रमणबाट फर्किरहेका सोमेश्वर मा.वि, माडी बरुवाको बस गएराती दुर्घटनाग्रस्त – Swadesh Online
शैक्षिक भ्रमणबाट फर्किरहेका सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालय, माडी बरुवाका बिद्यार्थीहरु चढेको बस गएराती गीतानगर नजिकै पुल्लरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विद्यार्थीहरु घाइते भएका छन् ।
भारतको सिक्किमसहित पूर्वी नेपालको शैक्षिक भ्रमण सकेर फर्किरहेका विद्यार्थीहरु चढेको ना.६ ख. ९३६६ नम्बरको बस पुल्लर मोडभन्दा १० मिटरको दुरीमा गीतानगरतर्फ पल्टिन पुग्दा विद्यार्थीहरु घाइते भएका हुन् । बसमा सवार ३४ जनामध्ये २५ जना विद्यार्थीहरु सामान्य घाइते, ५ जना विद्यार्थीहरु सघन घाइते र १ जना गम्भीर घाइते भएकोमा सबैको भरतपुरस्थित सि.एम.सी. हस्पिटलमा उपचार भइरहेको अस्पतालबाट वडा नं. १ का वडाध्यक्ष कृष्ण पौडेलले स्वदेश एफ.एम.लाई जानकारी दिनुभयो ।
राती करीब १२ बजे दुर्घटना भएको हो । अगाडीबाट अचानक आइपुगेको स्कुटरलाई जोगाउन खोज्दा बस पल्टिन पुगेको बसधनी समेत रहनुभएका वडाध्यक्ष पौडेलले जनाउनुभयो । घटनाको अपडेट स्वदेश एफ.एम.मार्फत प्रकाशन र प्रसारण गरिरहनेछौं ।